အတော်များများကအအေးမိပြီးနောက်ချောင်းဆိုးဖြတ်သန်းတဲ့အခွအေနေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရောဂါ၏အဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီ, ဒါပေမယ့် bronchial ပြဿနာများဆက်လက်အတူ။ ချက်ချင်းနှိုးဆော်သံအသံမနေပါနဲ့ - ဒီယုတ္တိရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူများကတစ်ကျန်နေတဲ့ချောင်းဆိုးစံကိုခေါ်ပါ။ ကြက်ညှာချောင်းဆိုးခြင်း, အဆုတ်ရောင်သို့မဟုတ်ပင် - ကရောဂါ၏အခြားလက္ခဏာတွေပျောက်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံးပတ်ဆက်ရှိနေသေးလျှင်မူကား, ကဆိုးကျိုးများအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ် နာတာရှည်ချောင်းဆိုးရင်ကျပ် ။ အထူးပြုစမ်းသပ်မှုပြသ - ချောင်းဆိုးဒီလိုမျိုးတစ်ဦးလေးနက်ပြဿနာသို့မဟုတ်ကျန်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်အသေး bronchial ပြဿနာများနှစ်လကြာရှည်စေနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကူးစက်ရောဂါများ၏စူးရှသောအဆင့်နှစ်ခုသုံးရက်ကြာရှည်ခံသည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိအလွန် bronchi ၏ sensitivity ကိုတိုးပွားစေတော်မူသော, ထိုအဲယားဝေး၏နံရံကိုပျက်စီးစေရန်စီမံခန့်ခွဲ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ချောင်းဆိုးခြင်းရိုးရှင်းသောတော်ကိုနှိုးဆော် - အအေးသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့သောလေထု၏မွှန်, အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများအား။ ဤကာလအတွင်းလူနာမကြာခဏခြောက်သွေ့ချောင်းဆိုးသို့မဟုတ်လိပ်တစ်ဦးကအလွန်သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏအားဖြင့်ညှဉ်းဆဲ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, လည်ချောင်းပင်နေမကောင်းရပေမယ်သာယားလို့မရပါဘူး။
ဘုံအအေးပြီးနောက်အချို့သောအချိန်များအတွက်ခြောက်သွေ့ချောင်းဆိုးသည်းမပါဘူးဆိုရင်, အဲဒါကိုအိမ်မှာကုသမှုကိုဆက်လက်လိုအပ်သောဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အပူချိန်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုများကိုရှောင်ရှားရန်အကြံပြုလိုတယ်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာအနာလည်ချောင်းနှင့်ချောင်းဆိုးအတွက် run မရသင့်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာတွေကအထူးအာရုံစိုက်ဖို့အကြံပြုသည်။ ကျနော်တို့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် တစ်ဦးက x-ray , ရင်ဘတ်၏အထွေထွေစမ်းသပ်မှုများကျော်လက်နှင့်ပင်အချို့ကိစ္စများတွင်အပိုဆောင်းစမ်းသပ်မှုထွက်သယ်ဆောင်။ အများစုကတော့ရောဂါရှာဖွေပြီးနောက်လိပ် bronchial ပြွန်ကနေအထွက်ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့အထူးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်ပဋိဇီဝဆေး ascribed နေကြသည်။
မုန့် Ovestin - သင်မသိထားတဲ့အသုံးပြုမှုနည်းလမ်းများ,
မျက်လုံးဖိအား - နှုန်းသည်
အဆိုပါ ulnar အာရုံကြော၏ Neuropathy
လက်သည်း Onychomycosis - ကုသမှု
ပုံစံ "leves" ပြောသော
အချိုပွဲ "မိုဃ်းပွင့်အတွက်ပန်းသီး" - တစ်အံ့ဘွယ်သောရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားရစရာ
ချဉ် beets - တစ်စာရွက်
တော်ဝင် geranium - ရှနေဖြင့်ဝါဒဖြန့်
Santa Claus ဘယ်လိုဟောင်းဖြစ်သနည်း
အဘယ်ကြောင့်ဘီယာနှင့် ပတ်သက်. အိပ်မက်မက်?
Milos Bikovich ချိန်းတွေ့စူပါဆာရှာ Luss
အရင်ကဆိုရင်များအတွက် Felting - မာစတာအတန်းအစား
Calibrachoa - အမျိုးအနွယ်ကိုအနေဖြင့်ကြီးထွားလာ